Basal calculator heerka dheefshiidka
Basal calculator heerka dheefshiidka kuu ogolaanayaa inaad si ay u xisaabiso heerka dheefshiidka asalka aad, in ay tahay lacagta ee calories in jirkaaga ka gubtay halka nasan jawi dhexdhexaad qoraxda.
Ku qor xuduudaha jidhkaaga si ay u xisaabiso BMRka
Nooca Jinsiga: Lab Dhaddig
Miisaanka: kiilo pounds
Sentimitir cagaha / inches
Heerka dheefshiidka Basal (ama BMRka) waa tirada calories aad maalin gubi lahaa haddii aad firfircoonayn oo maalintii oo dhanna halkaasay joogeen sariirta iyo tamarta loo isticmaali doonaa oo kaliya si ay u ilaaliyaan xubnaha aad muhiim, taas oo ka mid ah maskaxda, wadnaha, sambabada, habdhiska, muruqyada oo kale.
Calculator Miisaanka xisaabin doonaa ah miisaanka jidhka ku haboon iyo dastuurka: by formula ee index Quetelet, Brock, Solovyov. qaadashada Calorie.
Xisaabi body mass index ragga iyo dumarka ku xiran ka da'daada iyo qaabka jirka.
Miisaanka saxda calculator
Xisaabi miisaanka jidhka ugu fiican ee ragga iyo dumarka ee ku tiirsanaanta ee aad isku da'da, dhererka iyo nooca jidhka.
Qaab Body calculator
Xisaabi qaab jirkaaga iyo nooca jidhka, miisaanka fiican, baruurta jidhka iyo boqolkiiba baruurta jidhka, heerka shiid iyo kale.